September 2020 | Umbele
Zama imithombo eminingi yokungenisa imali ngoba siphelile isikhathi sokusebenzela inkampani eyodwa, kuloba uNtokozo Biyela
UKUFIKA ngokuzuma kwegciwane iCOVID-19 kudale inhlekelele kwezomnotho nokudideka ezizweni zonke. Kulethe nokuguquka kwemiqondo kwabaningi. Iningi belithembele emisebenzini yalo ekade liyenza iminyaka ngeminyaka ukuthi izohlale ikhona ingunaphakade nokuthi izoligcina ize iye empeshenini.
I-CALGRO M3 ithe umbiko wezimali wonyaka ophele ngo-Agasti 31 uzohluka okungenani ngo-20% uma kuqhathaniswa nonyaka wezimali odlule. Ithe ibheke isheya ngalinye lilahlekelwe phakathi kuka-26c no-26.60c.
I-UNICORN Capital ithe umbiko wokuphela konyaka wezimali ophele ngoJuni 30 uzohluka okungenani ngo-20% uma kuqhathaniswa nonyaka wezimali odlule. Ithe isheya ngalinye lizokwehla ngemali ephakathi kuka-6.72c no 9.39c. Umbiko ogcwele kulindeleke ukuthi uphume ngoLwesihlanu.
I-EOH, inkampani yezobuchwepheshe, imemezele ukuthi i-Public Investment Corporation iyazise ukuthi izonciphisa isabelo sayo kule nkampani igcine isinamasheya alinganiselwa ku-4%.
UNksz uPhumelele Myeza, umnikazi wePure Elegance @Home, eyenza izinhlobo zikajamu ezehlukene
Uthando lokupheka, ukuba yisiphekepheke nesizungu esibangwe wumgonqo kumholele ekusunguleni ibhizinisi lokwenza ujamu owehla esiphundu. Umnikazi walo uxoxe noSLINDILE KHANYILE
UKUFUNA into ehlukile angachitha ngayo isizungu ngesikhathi sikathaqa kumzalele ibhizinisi elikhula ngamandla.
UNksz uPhumelele Myeza, umsunguli wePure Elegance @Home usehlale ematasa ediliva izinhlobo zikajamu awenza ekhaya amakhasimende akhe angawuvali umlomo ngawo.
SELUQALILE uhlelo lokuqoka uKhomishana omusha, namaphini akhe amane, wenhlangano elawula ukusebenza kwezinkampani zemali eNingizimu Afrika, iFinancial Sector Conduct Authority. Loku kumenyezelwe wumnyango wezezimali. Ithimba elibhekene nomsebenzi wokuqoka abazovala lezi zikhala ngoMnu u-Ismail Momoniat, uNksz uFundi Tshazibana, uNksz uThezi Mabuza, uSolwazi Deon Rossouw noMnu uSizwe Nxasana.
IBHODI le-Advanced Health selinqume ukudayisa lezo zingxenye zebhizinisi ezingenzi kahle njengoba iqhubeka nokuzihlela kabusha. Lokhu kulindeleke ukuthi kuthathe cishe unyaka wonke njengoba inkampani ixoxisana nabantu abahlukene
KWAZISWA abanamasheya kwi-MTN Zakhele Futhi ukuthi le nkampani imatasa iqedela umbiko wezimali wohhafu wonyaka ophele ngoJuni 30 kanti uzophuma noma ngaphambi noma ngomhla ka-30 Okthoba.
I-STATISTICS South Africa izochicilela izibalo ezizoveza ukuthi kumi kanjani ngokwezibalo zokuqashwa kwabantu eNingizimu Afrika ngoLwesibili oluzayo. Lezi zibalo ezaziwa nge-Quarterly Labour Force Survey zizobheka ikota yesibili yonyaka.
I-FAIRVEST Property Holdings, enenxanxathela yezitolo emakhaya, ikhiphe umbiko wezimali wohhafu wonyaka ophele ngoJuni 30, lapho ibike khona ukuthi imali engenile ikhuphuke ngo-8.7%, yafinyelela kuR532 million kodwa inzuzo yesheya ngalinye yehle ngo-45.7%, yafinyelela ku-12.46c isheya ngalinye.
I-FNB iqoke ukaputeni wamaBhokobhoko uSiya Kolisi njengenxusa layo. Leli bhange lithe ngokusebenzisana noKolisi lisakhombisa ukuzinikela kwalo ekusizeni umphakathi
Izolo uNgqongqoshe wezeziMali uMnu uTito Mboweni ubewusihlalo womhlangano wesine obanjwa ngokuhlanganyela ngongqongqoshe bezezimali nabohwebo. Ongongqoshe bavumelene ngokubuyekeza iSouthern African Customs Union okumele igxile kukona ukuhambisana nezinguquko emhlabeni nase-Afrika eseNingizimu ezibe nomthelela kule nhlangano.
I-TRELLIDOR ikhiphe imiphumela yonyaka wezimali ophele ngoJuni 30 izolo lapho ibike ukuthi imali engenile yehle ngo-18.1%, yafinyelela kuR422 million. Inzuzo ngokwesabelo ngasinye (headline earnings per share) yehle ngo-65% yaba wu-13.8% isabelo.
I-GROWTHPOINT Properties iqoke uNkk uPrudence Lebina noMnu u-Andile Sangqu njengabaqondisi abasha bebhodi. UNkk Lebina, oyi-chartered accountant nesikhulu esiphezulu se-TriAlpha Investment Management, uzoba yilungu lekomidi lomgcinimabhuku. USangqu uzothatha izintambo njengosihlalo wekomidi le-Social, Ethics and Transformation uma uMnu uMzoli Diliza esethatha umhlalaphansi.
I-BRITISH American Tobacco izokhokhela abanikazi bayo inzuzo elandelayo ngoNovemba 12. Le nkampani yamemezela ngoFebhuwari ukuthi le nzuzo izoyikhokha kane; ngoMeyi, ngo-Agasti, ngoNovemba nangoFebhuwari ngo-2021.
I-DELTA Property Fund ixwayise abanikazi ukuthi kukhona uphenyo olwenziwa yibhodi yayo okungenzeka lube nomthelela kwisabelo sayo.
IMALI engenayo eHulamin yehle ngo-30%, yafinyelela kuR3.7 billion. Le nkampani egxile ekulolongeni i-aluminium imemezele imiphumela yayo yezinyanga eziyisithupha, lapho ithe umthamo wehle ngo-35%, wafinyelela ku-71 000 tons.